chicagoan 59 days ago
AnandNepal 59 days ago
AnandNepal 44 days ago
atomic 44 days ago
AnandNepal 23 days ago
chicagoan 17 days ago
AnandNepal 14 days ago
Visitor is reading Nepali Story - Sunkeshari Maiya ko Katha
Visitor from DE is reading hey
Visitor is reading Help With Python Software
Visitor from DE is reading yama budha's Yo prashanga is copied from This instrumental b
Visitor is reading To all aishwarya fans
Visitor is reading "BITCH-itra America"
Visitor from GB is reading Affordable University for the Chemical Engineering
Visitor from DE is reading BIRATNAGAR REUNION IN SAJHA!!!!
[VIEWED 2863 TIMES]
Posted on 11-10-20 6:46 PM Reply [Subscribe]
This story was prepared on the request of Sajha members - so, I think it deservesaseparate topic ..
साझाका @pandeyji ले "Sunkeshra rajkumari ko katha pani ramro cha if you want to add!! " भन्नु भए पछि अर्का
@chicagoan ले "Sunkeshri maiya ko katha maile kati khoje katai bhetina..kahan hola?"
अनि @logan ले "Sunkesri story so far I recall is sibling (sister and brother) who separated for some reason, I can not recall the the story of their departure but they were united. "
अपडेट - (लोगनले खोजेको यो कथा रहेछ)
तर, कथा भने अलि फरक रहेछ। शुरुमा अल्छि लाग्दो कथा छ - तर, पछि चाखलाग्दो हुंदै जान्छ। फुर्सद भयो भने यसलाइ अलि चाखलाग्दो पाराले छोटो बनाउने प्रयास गर्नु पर्ला। अहिले चाँहि खोज्दा भेटेको १०० पेजको किताव मा जे जे लेखेको छ त्यसैको वाचन ।
त्यसलाइ शशि गुरागाइँले वाचन गर्नुभएको छ। मैले एडिट मात्रै गरेको हुँ । पुरानो कथा .. अनि, त्यसबेलाको अलि फरक भाषा अनि अनौठो अनौठो बर्णनहरुको कारण शशिलाइ पढ्न पनि त्यति सजिलो चाँहि भएको छैन तै पनि उहाँले १४ भाग पढिसक्नु भएको छ। चाँढै सकिन्छ होला :
१४ - रानिलाइ सुर्यबिक्रम कामदेव जस्तो सुन्दर लाग्छन अनि उनलाइ फसाउँछिन
१५ - (बाँकि नै छ)
अब सबै भाग १ - १ घण्टाको
Last edited: 12-Dec-20 10:47 PM
Last edited: 13-Dec-20 01:11 PM
Posted on 11-19-20 12:09 PM [Snapshot: 172] Reply [Subscribe]
ओहो साह्रै नै राम्रो सृजना गर्नु भएछ आनन्द नेपाल ज्यु! अनि क्रेडिट दिनु भएको मा धन्यबाद्! समय निकालेर तपाईंको राम्रो सृजना अबस्य सुन्ने छु!!
Posted on 11-27-20 7:12 PM [Snapshot: 481] Reply [Subscribe]
Ho la maile bhaneko sunkeshri maiya ko katha chahin yo ho. Dhanyabad Ananda ji
Posted on 11-27-20 8:26 PM [Snapshot: 487] Reply [Subscribe]
Yo video bhanda agadiko katha ko kura gareko
Posted on 11-28-20 1:26 PM [Snapshot: 558] Reply [Subscribe]
That is good .. @chicagoan
The story isabit confusing ..
The music video one of you guys shared wasabit different story.
गितमा चाँहि मामा संग बिहे गरिदिन लागेका रहेछन ;)
बिहे पछि बाबा -> भेनाजु .. आमा -> अमाजु , दिदि -> भाञ्जि , भाइ -> भन्जा .... बन्ने रहेछन
अनि, ति मामाले रेप गरेको र रेप भिक्टिम लाइ बिहे गरिदिन लागेको जस्तो लागेको थियो।
Posted on 11-28-20 1:29 PM [Snapshot: 562] Reply [Subscribe]
Ho geet le so called "creative liberty" liyeko hola. Maile bachcha ma suneko katha chahin tapainle post garnu bhayeko katha sanga mel khanchha, geet sanga hoina
Posted on 12-13-20 1:07 PM [Snapshot: 1294] Reply [Subscribe]
सुनकेशरि मैयाको दिदि भाइको कथालाइ त्यति धेरै ले हेरेनन ..
राम्रो लागेको हुनाले अझ धेरै चर्चित हुनु पर्ने लागेको थियो .. तेसैले, त्यो कथालाइ अलिकति मोडिफाइ गर्दा पो ठिक हुन्छ कि भनेर मैले आँफैले वाचन गरेको छु ..
(दुइटै भर्सन सुनेर कुन ठिक छ भनिदिनुहुन अनुरोध छ -- भएन भने, अझै मोडिफाइ गरेर फेरि बनाउँने छु .. )
१) वाचन - आनन्द नेपाल
२) तलको शशिले वाचन गरेको २ मिनेट छोटो छ
किनकि यो भिडियो त्यति नचलेपछि मैले कथालाइ मोडिफाइ गरेर सुनाएको हुँ ..
Posted on 12-13-20 2:40 PM [Snapshot: 1308] Reply [Subscribe]
भर्खर छबिलाल को जीवनी को भीडियो हेरें , केही कुरा थप्न र सच्याउन चाहन्छु। छबिलाल २०३८ सालमा नभई सम्भवत २०४६/४७ वा २०४८ साल तिर भूमिगत भएको हुनुपर्दछ । अनि केही तथ्य कुरा जोड्न चाहन्छु , उनी त्यति बेला ललितपुर को एरिया मै परिवार सहित डेरामा बस्थे , यो कुरा अहिले पनि त्यतै बस्ने सबै जसोलाई थाहै छ होला । उनको जनमोर्चा पार्टी मै संल्गनता थियो , उनि कम्युनिष्ट पार्टी का संस्थापक स्वरगीय् नर बहादुर कर्माचार्य निकट थिए , जो आफै जनमोर्चा मा पनि थिए । पछि पुष्प कमल दाहाल भूमीगत र क्रान्ति मा होमिए । अहिले नारायण काजी को भीडियोमा चर्चा मा आएको पात्र “सुसन” , संस्थापक स्वर्गिय नरबहादुर कर्माचार्य का भाई का सुपुत्री हुन । स्मरण रहोस, “नरबहादूर कर्माचार्य” अबिबाहित र नि-सन्तान थिए । गणतन्त्र को आगमन संगै छबिलाल को “ हाई राईज” लाईफ संगै , सुसन कर्माचार्य पनि राईज मा आएको अनुमान लगाइन सकिन्छ , उनी नारायण काजी को निकट भई काम गरेको ; गणतन्त्र को नेपालमा शुरूवाती संगै भएको मीडिया रेकर्ड मै देखिन्छ ।
अब प्रश्न यति मात्रै हो कि , छबिलाल को यो बिशाल अबुझ सम्पत्ति , काजी को संलग्नता नभएको करोडौं को शेयर , अनि आफ्नै संगै को सिम्पली काम गर्ने कर्माचार्य को त्यति ठूलो सम्पत्ति को स्रोत त कस्लाई नै थाहा होला त ?
Posted on 01-03-21 2:03 PM [Snapshot: 2028] Reply [Subscribe]
नयाँ बर्ष संगै अब फेरि लोक कथा भन्न थाल्ने हो !!
Posted on 01-08-21 4:35 PM [Snapshot: 2259] Reply [Subscribe]
Kirat dharma sambandhit sumnima ra paruhang ko katha ramro lagyo
Posted on 01-12-21 9:30 AM [Snapshot: 2470] Reply [Subscribe]
* सुम्निमा र पारुहाङ्को कथा *
कथा पुरा भयो (पढ्न अल्छि लाग्नेलाइ सुन्ने, हेर्ने पनि तयार भयो)
पढ्न मन लाग्छ भने रिप्लाइ गर्नुस, लेखेको कथा पनि पोष्ट गरुंला
Last edited: 13-Jan-21 10:49 AM
Posted on 01-13-21 10:48 AM [Snapshot: 2538] Reply [Subscribe]
अब अर्को कथाको पालो - अनौठो खालको कथा रहेछ
** हेत्छाकुप्पाको कथा **
आमा बाबु दुबै बितेपछि हेत्छाकुप्पा सानैमा टुहुरो भयो। उसको घरमाउ र उसका दुइ दिदिहरू तायामा र खियामा मात्रै थिए। बाबु आमा बाबु नभएको यो परिवारलाइ चाक्लुङ्धिमा राक्षसनिले निकै नै दुख दिएकि थिइ। त्यो राक्षसनिले उनिहरुको खेतबारिको अन्न त खाइ खाइ र भकारिमा भएको सबै अन्न पनि खाएर सकिदिए पछि उनिहरू भोकभोकै भए।
"दिदि मलाइ असाध्यै भोक लाग्यो," हेत्छाकुप्पाले भन्यो।
हुन त, दिदिहरु पनि त भोकै थिए। तर, उनिहरुले "भोक लाग्यो," भनेर भन्ने पनि कोहि थिएनन।
दिदिहरु जङ्गल गए र त्यहाँबाट खोक्लि साक्लि र गिठ्ठा भ्याकुर ल्याएर भाइलाइ खुवाए। तायामा र खियामाले बाँकि रहेको खोक्लि साक्लि र गिठ्ठा भ्याकुर आँफु पनि खाएर बाँचि रहेका थिए। तर, चाक्लुङ्धिमा राक्षसनिले यो कुरा थाह पाएपछि खोक्लि साक्लिलाइ पाताल भसाइ दिइ। गिठ्ठा भ्याकुरमा खक्पा छर्केर खान नहुने तितो बनाइ दिइ। खानै नसकिने भएपछि, अरु केहि पनि खानेकुरा नपाएपछि दिदिहरुले नजिकै फलेका ऐसेलुको रस ल्याएर भाइलाइ खान दिन थाले तर। तर, ऐसुलुको रसले मात्र भाइ बाँचाइ राख्न नै गाह्रो भयो। अब के गर्ने होला भनेर दिदिहरुलाइ फसाद पर्यो।
नजिक कुनै पनि खानेकुरा नभए पछि खोज्न टाढै जानु पर्ने भयो। त्यसबिच भाइलाइ भुलाइराख्न उनिहरुले बुचुकुलकुमा एउटा खानेकुरा उसिन्न राखेर अरु खानेकुरा खोज्न भनेर टाढा टाढा गए । बुचुकुलकुमा उसिनिरहेको त्यो गोलो गोलो चिज कुन बेला पाक्छ र खाउँला भनेर हेत्छाकुप्पा हेरि रहेको थियो। एकछिन पछि उसले पाक्यो कि भनेर छाम्यो एकदमै कडा थियो, पाकेकै रहेनछ। एकछिन पछि फेरि, पाक्यो कि, भनेर छाम्यो तर पाकेकै रहेनछ। हेत्छाकुप्पा यता उता खेल्यो अनि फेरि आएर पाक्यो कि भनेर छाम्दा पनि पाकेकै रहेनछ। उसलाइ भोक लागिसकेको थियो, दिदिहरु पनि अरु खानेकुरा खोज्न भनेर हिँडिसकेका थिए।
खासमा, खानेकुरा केहि पनि नभएको हुनाले दिदिहरुले भाइलाइ झुक्याउन ढुंगाको लोहोरोलाइ पो उसिन्न राखिदिएका रहेछन। ढुंगा के पाक्थ्यो, तेसैले कुर्दा कुर्दा भोकले निराश भएको हेत्छाकुप्पा त्यहिँ लड्यो। उ लड्दा उम्लिरहेको तातो पानि उसको कोमल जिउ भरि पोखियो। भोकले आत्तिएको, खान नपाएर निराशामा चुर्लुम्मै डुबेको हेत्छाकुप्पालाइ त्यसपछि कहिल्यै खानु परेन। किनकि, केहि क्षणमा नै उसको प्राण पखेरु उड्यो।
उता दिदिहरु, तायामा र खियामालले दिनभर जङ्गलमा खानेकुरा खोजे। घर नजिकका सबै खानेकुर चाक्लुङ्धिमा राक्षसनि बिल्लुप्त पारिसकेकि थिइ। धेरै पर पुगेपछि उनिहरुले बल्ल बल्ल बनकेरा फेलापारे। हिँड्दा हिँडदा लखतरान पर्दै घर आइपुग्दा घरमा भाइ हेत्छाकुप्पा भने मरिसकेको थियो।
त्यति दुख गरेर ल्याएको बनकेरा खान नपाउँदै आँफ्नो प्यारो भाई हेछाकुप्पा त्यसरि मरेको देखेर उनिहरु अति नै दुखित भए ।